Ieholide zasehlobo Iiholide zokuphumla Ukuhamba | Amaphepha ombala wamahhala okukhuphela
Yenza ieholide zasehlobo zixesha elihle
Musa ukulibala ukufunda
Ukugcina uqhagamshelwano nabahlobo besikolo ngeeholide
Ieholide zasehlotyeni ziya kuza. Le nyaniso yenza intliziyo yomfundi ibethe ngokukhawuleza, njengoko ikhefu zasehlobo zithandwa kakhulu, njengoko eli liholide elide lixesha elihle kubantwana abaninzi. Enyanisweni, ikhefu zeeholide zikhulu kakhulu ukwenza izicwangciso zezinto ezahlukeneyo zokwenza.
Yintoni enokuyenza kwieholide zasehlotyeni
Njengoko ieholide zasehlotyeni zidlulileyo kwiiveki ezimbalwa, kukho ixesha elaneleyo lokuhamba okanye ukuthatha ieholide kwenye idolophu okanye ilizwe. Zininzi iindlela zokwenza ieholide zasehlotyeni ixesha elikhethekileyo.
Ieholide zasehlobo eeholide zasehlotyeni
Abazali banokuza kunye nezinto ezahlukeneyo zokubanceda baqulunqe eli xesha. Inzala ikhangele phambili kule holide ekhethekileyo minyaka yonke. Ngenxa yeso sizathu, abazali banokwenza abantwana babo bavuyiswe xa beqinisekisa ukuba ikhefu labantwana liba lixesha elingalibalekiyo.
Ieholide zasehlobo ziyimpawu ezikhethekileyo kubantwana
Ukulindela kweeholide zasehlotyeni ziqala ngabafundi abaninzi kwiiveki ezimbalwa ngaphambi kweeholide zangempela, kuba kubantwana, ezi holide zidla ixesha elihle. Okokuqala kwaye okubaluleke kakhulu, ezi holide ezinde zibhekisela kubantwana ukuba akudingeki ukuba baye esikolweni kwaye banethuba lokulala kakuhle ixesha elide okanye bahlale bevukile kusihlwa.
Ngexesha leeholide zasehlotyeni, abantwana banethuba lokulibala uxinzelelo lwesikolo kwithuba elithile, kuba ngexesha leeholide kunethuba lokubuya kwisikolo kunye nokuxinezeleka kokufunda. Ngoku, ngokuqinisekileyo, umbuzo uvela ngendlela enokwenzeka ngayo ukwenza ieholide zasehlotyeni ixesha elikhethekileyo. Kukho iindlela ezininzi zokufeza le njongo.
Abantwana banokwenza okuninzi ngexesha leeholide. Ixesha elifudumele livumela izinto ezininzi. Umzekelo, abantwana bangaya ngaphandle ukuze badlale apho. Abantwana abaninzi basebenzisa iiholide zasehlotyeni ukuba bazinikele kwixesha lokuzilibazisa. Ukongeza, iiholide zinika ixesha elifanelekileyo lokuqalisa umdlalo omtsha.
Imidlalo yithuba elihle kubo abaninzi abantwana ngexesha leeholide ehlobo. Iintsapho nazo zingasebenzisa iholide zasehlotyeni ukuba zenze iindawo ezahlukileyo, ukwenzela ukuba zisebenzise kakuhle ixesha leeholide, kuba uhambo kunye nosapho, onke amalungu entsapho anokuzonwabisa.
Sebenzisa ihlobo elihle lemoya yexesha lokuhamba kunye nosapho
Ehlobo, ngenxa yemozulu elungileyo, ngokuqhelekileyo kunokwenzeka ukuhamba kunye nosapho lonke, apho intsapho iyakonwabela khona. Ieholide zasehlotyeni zingasetyenziselwa ukucwangcisa iindwendwe ezahlukeneyo, njengoko iiholide ziyakwazi ukukhawuleza ukuba akukho zicwangciso zemisebenzi ngexesha leeholide.
Ieholide zasehlotyeni ziquka iiveki eziliqela apho intsapho ingenza iindwendwe kwiindawo ezahlukeneyo. Ngokomzekelo, kukho ithuba lokutyelela i-zoo, ukuya echibini lokubhukuda, uchithe ixesha elithile ngaphandle okanye ucwangcise ukutyelela ipaki yomxholo. Ngoko kukho iindlela ezininzi zokuvakasha ukuba intsapho iyakucinga ngexesha leeholide zasehlotyeni. Ngaphandle kohambo lweentsuku, iieholide ngexesha lehlobo lasehlotyeni likhulu neeholide elide, apho yonke intsapho inokuphumla.
Iintsapho ezininzi zisebenzisa ieholide zasehlotyeni ukuya kwiholide. Ngaba ikhefu kufuneka icwangciswe ngeeholide, ngoko ke le nto iyona nto ekhethekileyo yovuyo kubantwana, kuba iholide idla ngokudibana namava amaninzi ahlukeneyo.
Iholide yentsapho ngexesha leeholide zasehlotyeni libalaseleyo kakhulu kubantwana abaninzi njengoko banako ukwenza izinto ezininzi ngelixa eholide. Ngokomzekelo, inzala inokuchitha ixesha ngexesha lokubhukuda kwehotele. Kodwa iholide ingasetyenziselwa ukwenza uhambo, kuba kwelinye ilizwe, kukho indawo ezininzi enokuzifumana intsapho.
Ngokuqinisekileyo kukho neentsapho ezizizathu ngezizathu ezahlukahlukeneyo ngexesha leeholide zasehlotyeni azikwazi ukuthatha iholide kunye neendlela ezimbalwa nje. Kule meko, inzala ingasebenzisa ixesha lokufunda ukuze ikulungele kakuhle ukuqala kwesikolo emva kweeholide.
Ieholide zasehlotyeni zandisa ixesha elide. Ekubeni kungenzeka ngokukhawuleza ukuba abantwana bayalilibala iimpahla zesikolo kwaye ngoko bunzima xa isikolo siqala kwakhona emva kweeholide.
Iholide yentsapho enobungane ngexesha leeholide zasehlobo
Ewe, akukophuli ukuba inzala ifunde ikhefu zasehlotyeni, ukuze izinto ezifundiswa ngabantwana ngexesha leemfundo azilibalekanga. Ngoko ke, kucetyiswa ukuba abantwana bathathe iincwadi zezikolo ngezikhathi ezithile ukuze bafunde ngeeholide.
Abazali banethuba lokunceda abantwana babo ngokubanceda bafunde ngeholide. Nangona kunjalo, iiholide ngokusemthethweni zikhefu kwixesha le sikolo. Ngoko ke, ukuzonwabisa kwieholide zasehlotyeni akufanele kutyeshelwe. Emva koko, wonke umntu ebudeni bobubomi bakhe ufumana amaxesha ambalwa ukuzonwabisa kwiholide zasehlobo.
Kukho iindlela ezininzi zokwenza ieholide zasehlotyeni zithokozise inzala. Akukona mfuneko ukuba uthathe uhambo lweentsuku okanye iholide ukuze unike abantwana ithuba lokuzonwabisa ngexesha leeholide.
Iintsapho zinokusebenza kunye ekhaya kwiintsebenziswano ezidibeneyo ezingasetyenziselwa ukuma iholide.
Ngokomzekelo, abazali banokudlala imidlalo kunye nabantwana babo ngeeholide. Iintsapho ezininzi zisebenzisa iholide zasehlotyeni ukuchitha ixesha kunye. Abantwana banethuba lokuhlangana nabahlobo besikolo ngeli holide.
Wonke umntwana unezicwangciso ezahlukeneyo zeeholide zasehlobo. Ngoko ke kunokwenzeka ukuba afunda nabo bekunzima ukubonana ngexesha leeholide. Ininzi yabantwana ibandakanya ukubaluleka kokubona abahlobo babo ngeeholide. Ngokukodwa kwieholide ezide zasehlobo, kungenzeka ukuba abantwana banelangazelela abahlobo babo esikolweni.
Ukuba oko kwenzeka, kukho ithuba lokuba abantwana baya kwenza i-aphoyintimenti yokudlala, kuba kunjalo, afunda nabo nabo bangabonana ngexesha leeholide kwaye bachithe ixesha kunye kunye.
Kungakhathaliseki ukuba ziphi na izinto ezicwangcisiweyo kwieholide zasehlotyeni, abazali banokubanceda abantwana babo ukuba benze iiholide ngexesha elihle ngokuvumela abantwana babo ukuba babe yintsana ngexesha lokuphumula.
Kampu | I holide
Kwipaki yokuzonwabisa kunye nosapho ... I holide
Ikhefu lokuphila kakuhle kubazali | Iholide leHlabathi leHlabathi